प्लस टु पछिकाे गन्तव्य-१०
दिनेश गौतम काठमाडाैं, २६ साउन
कक्षा १२ पछि के पढ्ने ? कुन विषय पढेकाले के पढ्न पाउँछन् ? पढेपछि के बन्ने ? के कस्ता अवसर छन् ? विषय कसरी छनोट गर्ने ? नेपालमा के कस्ता विषयको पढाइ हुन्छ ? विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न कुन विषय उपयुक्त हुन्छ ? यी र यस्तै प्रश्नलाई समेटेर कक्षा १२ उत्तीर्ण भएका विद्यार्थीलाई विषयको महत्त्व, सम्भावना, छनोट आदिका विषयमा सहयोग गर्न शिलापत्रले ’प्लस टु पछिको गन्तव्य ’ स्तम्भ सुरु गरेको हो । विद्यार्थी र अभिभावकलाई सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको यो स्तम्भ फलदायी हुने हामीले अपेक्षा गरेका छौं । आज हामीले ब्याचलर अफ कम्प्युटर इन्जिनियरिङ (B.E. Computer) बारे सामग्री तयार पारेका छौं ।
के हो कम्प्युटर इन्जिनियरिङ ?
कम्प्युटर इन्जिनियरिङ कम्प्युटरको सफ्टवेयर र हार्डवेयरबारे अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने शिक्षा हो । नयाँ कम्प्युटर कस्तो बनाउने ? त्यो कम्प्युटरका लागि कस्तो सफ्टवेयर आवश्यक छ ? आईटी क्षेत्रमा विश्वमा के हुँदै छ ? नयाँ नयाँ प्रविधिको खोज तथा अनुसन्धान गर्ने र मानिसले गर्ने कामलाई प्रविधिबाट सहज बनाउन सिकाउने शिक्षा कम्प्युटर इन्जिनियरिङ हो । सैद्धान्तिक कुरालाई प्रयोगात्मक रूपमा उतारेर जे समस्या छ, त्यसको समाधान प्रविधिबाट गर्न सिकाउने शिक्षा हो यो ।
सिभिल, आर्किटेक र मेकानिकल इन्जिनियरिङ अध्ययन गरे पनि त्यो क्षेत्रको काम पनि कम्प्युटरको माध्यमबाट हुन्छ । ती कामका लागि सहज बनाउने भनेको कम्प्युटर नै हो । सिभिल इन्जिनियरले पुल बनाउँछन् । तर त्यो पुल ठीक छ कि छैन भनेर कम्प्युटरको सफ्टवेयरबाट पहिले परीक्षण गरिन्छ । यसबाट फिजिबल भएपछि मात्र पुल बनाउने हो । त्यो सफ्टवेयर कम्प्युटर इन्जिनियरले बनाउँछन् त्यसैले दक्ष कम्प्युटर इन्जिनियर उत्पादन गर्ने शिक्षा कम्प्युटर इन्जिनियरिङ हो ।
कम्प्युटर इन्जिनियरिङमा डिप्लोमा, स्नातक र स्नातकोत्तर तह अध्ययन गर्न सकिन्छ । स्नातक तहको कम्प्युटर इन्जिनियरिङ कोर्स चारको वर्षको हुन्छ । जसमा ८ वटा समेस्टर हुन्छन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालय, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, पोखरा विश्वविद्यालय, काठमाडौं विश्वविद्यालय र मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयले यो कोर्स सञ्चालन गरेका छन् । जसमा ४८ जनाको कोटा हुन्छ । क्यापसको भौतिक संरचना राम्रो भएकाले बढीको संख्यामा पनि कोटा पाउँछन् ।
जीपीए २.० ल्याएकाले
सीटीईभीटीबाट कम्प्युटरमा डिप्लोमा गरेकाले (४५ प्रतिशत ल्याएको हुनुपर्छ )
कम्प्युटर इन्जिनियरिङ पढ्न १०–१२ लाखसम्म खर्च लाग्छ । तर, क्याम्पसले दिने सेवा सुविधाका आधारमा केही फरक हुन सक्छ ।
गरिब तथा जेहन्दार विद्यार्थीका लागि छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरिएको छ । विश्वविद्यालयले कोटाको १० प्रतिशत छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरेको छ । विश्वविद्यालयले लिने प्रवेश परीक्षामा बढी अंक ल्याएका र समानुपातिक प्रणालीका आधारमा छात्रवृत्ति दिइन्छ । क्याम्पसहरूले सेमेस्टर टपरलाई पनि छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरेका छन् ।
प्राक्टिकल र प्रोजेक्ट वर्क
आईटीसँग सम्बन्धित कोर्स भएकाले प्राक्टिकल र प्रोजेक्ट वर्कलाई विशेष प्राथमिकता दिइन्छ । विद्यार्थीले स्नातक तह उत्तीर्ण गरेपछि कार्यक्षेत्रमा गएर सहजै काम गर्न सक्ने गरी प्राक्टिकल र प्रोजेक्ट वर्क गराइन्छ ।
एड्भान्स कलेज अफ इन्जिनियरिङ, कुपण्डोल, ललितपुर
सगरमाथा इन्जिनियरिङ क्याम्पस, सानेपा, ललितपुर
खोपा कलेज अफ इन्जिनियरिङ, भक्तपुर
काठमाडौं इन्जिनियरिङ कलेज, कालिमाटी काठमाडौं
कलेज अफ इनफर्मेसन टेक्नोलोजी एन्ड इन्जिनियरिङ, सुविधानगर, काठमाडौं
हिमालयन ह्वाइट हाउस इन्टरनेसनल, पुतलीसडक, काठमाडौं
पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, मोरङ
पोखरा इन्जिनियरिङ कलेज, कास्की
पोखरा युनिभर्सिटी स्कुल अफ इन्जिनियरिङ, पोखरा, कास्की
काठमाडौं विश्वविद्यालय र मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयले अरू कलेजलाई सम्बन्धन दिएका छैनन् । काठमाडौं विश्वविद्यालयको काभ्रेको धुलिखेल र मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयको सुर्खेतमा पढाइ हुन्छ ।
अहिले जुनसुकै क्षेत्रमा कम्प्युटरको माध्यमबाट काम हुन थालेको छ त्यसैले जुनसुकै क्षेत्रमा काम गर्न सकिन्छ ।
विश्वमा हेर्ने हो भने सबैभन्दा धेरै कमाउने मानिस आईटी क्षेत्रकै छन् । नेपाल पनि आईटी क्षेत्रमा बिस्तारै फड्को मार्ने चरणमा छ । अहिले नेपालमा कर्मचारीले पनि मासिक ३० हजारदेखि माथि कमाउँछन् । आफ्नो क्षमताका आधारमा कमाउन सकिन्छ । आफैं कम्प्युटर क्षेत्रमा केही गर्छु भन्ने सोच छ भने उसले लगानीअनुसारको प्रतिफल पाउँछ । सफ्टवेयर कम्पनी खोलेर उद्यमी बन्न पनि सकिन्छ ।
स्नातक तहको कम्प्युटर इन्जिनियरिङ गरेका विद्यार्थी धेरै विदेश पुगेका छन् । मास्टर्स लेभल पढ्न र काम गर्न विद्यार्थी विदेश जान्छन् । पछिल्लो वर्षमा अस्ट्रेलिया, अमेरिका, क्यानाडा, युरोपमा नेपाली विद्यार्थी पुगेका छन् । आईटी कार्यालयमै काम गर्न आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेपछि आफ्नै खर्चमा विद्यार्थी विदेश जाने गरेका छन् ।
नयाँ नयाँ आइडिया र क्रिएटिभ दिमाग भएका र आईटीसँग नजिक हुन चाहनेका लागि उपयुक्त हुन्छ । सैद्धान्तिकभन्दा प्रक्टिकल गर्न रुचि भएका विद्यार्थीका लागि कम्प्युटर इन्जिनियरिङ फलदायी हुन्छ ।
कम्प्युटर इन्जिनियरिङको महत्त्व
अवसरका क्षेत्र धेरै
सुधीर गुरागाईं, निर्देशक, कलेज अफ इनफर्मेसन टेक्नोलोजी एन्ड इन्जिनियरिङ
नेपालमा विकासका काम धेरै बाँकी छन् । आईटीबिना ती सम्पन्न गर्न असम्भव छ । आईटीलाई प्राथमिकता नदिने हो भने हामी अझै धेरै पछि पर्छौं । देशलाई समृद्ध बनाउने क्षेत्र पनि आईटी हो । नयाँ नयाँ प्रविधिको खोज, अनुसन्धान र निर्माण गर्नुपर्छ । ती विषयमा कम्प्युटर इन्जिनियरिङमा बृहत् रूपमा अध्ययन र अनुसन्धान हुन्छ । अवसरका क्षेत्र पनि धेरै छन् । जुनसुकै कम्पनीदेखि कार्यालय सबै आईटीमा निर्भर छन् । ती क्षेत्रमा काम गर्न दक्ष जनशक्ति उत्पादनका लागि कम्प्युटर इन्जिनियरिङ महत्त्वपूर्ण मानिन्छ ।
टेक्नोलोजीको विकासका लागि दक्ष जनशक्ति उत्पादन
प्रवेश आचार्य, विभागीय प्रमुख, ललितपुर इन्जिनियरिङ कलेज
नेपालजस्तो देशमा आईटीको महत्त्व दिन प्रतिदिन बढ्दो छ । झनै विकासोन्मुख देशमा आईटी महत्त्व धेरै हुन्छ । अन्य देशको तुलनामा नेपालले सोचेअनुसार आईटीमा फड्को मार्न सकेको छैन । तर, अध्ययन र अनुसन्धानको काम भने सुरु भएको छ । यसलाई पनि सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ । आईटीको माध्यमबाट काम गर्ने नागरिकको संख्या दिन प्रतिदिन बढ्दो क्रममा छ । मानिस नयाँ नयाँ प्रविधिको प्रयोग गर्न रुचाउँछन् । प्रविधिको विकासका लागि दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न कम्प्युटर इन्जिनियरिङ महत्त्वपूर्ण मानिन्छ ।
संघीयताको मर्मलाई सफल बनाउन सकिन्छ
मनिस अर्याल, विभागीय प्रमुख, सगरमाथा इन्जिनियरिङ, कलेज
नेपालजस्तो भौगोलिक विकटता भएको देशमा कम्प्युटर इन्जिनियरको आवश्यकता बढी नै हुन्छ । विकटताका कारण एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जान सकिँदैन । भौतिक संरचना तत्काल बनाउन पनि सकिँदैन । त्यस्तो ठाउँमा आईटीको माध्यमबाट सेवा सुविधा पु¥याउन सकिन्छ । संघीयताको मर्मलाई सफल बनाउन पनि आईटीको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ । इन्टरनेटको माध्यमबाट सेवा प्रवाह गर्न सकिन्छ । ई–गभर्नेन्स पनि महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । यसले संघीयतालाई सफल बनाउन सक्छ ।
अरूलाई काम दिने
उत्सव सापकोटा : इन्जिनियर
काठमाडौं विश्वविद्यालयबाट कम्प्युटर इन्जिनियरिङ पढेका उत्सव सापकोटा अहिले आईटी क्षेत्रमै आबद्ध छन् । मानिसको कामलाई सहज र सरल बनाउन आईटीको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने भएकाले उनले यो कोर्स पढेका हुन् । आईटी क्षेत्रमा आफैं केही गर्ने उनको सपना छ । अरूको काम होइन, अरूलाई काम दिने गरी आईटी क्षेत्रको विकासमा लाग्ने उनी बताउँछन् ।
कम्प्युटर इन्जिनियरिङको आकर्षण
कम्प्युटर इन्जिनियरिङ पढ्ने विद्यार्थीको संख्या बर्सेनि बढ्दो क्रममा छ । बजारमा माग धेरै भएकाले पनि पढ्ने विद्यार्थीको संख्या बढेको हो । तर, नेपालमा कम्प्युटर बनाउने भन्दा पनि सफ्टवेयर निर्माणलाई मात्र प्राथमिकता दिइएको छ । नामअनुसारको विषय नभएको विद्यार्थीहरू बताउँछन् ।
असिम नेपाल ललितपुर इन्जिनियरिङ कलेजमा अध्ययनरत छन् । उनमा सानैदेखि कम्प्युटर क्षेत्रमा काम गर्ने रुचि थियो त्यसैले उनले यो कोर्स रोजे । तर, नामअनुसारको केही विषय प्रभावकारी नभएको उनी बताउँछन् । रोबर्ट निर्माणका लागि चाहिने सफ्टवेयर बनाउने उनको सपना छ ।
बजारमा नयाँ नयाँ प्रविधिको माग छ । मानिस थोरै समयमा धेरै काम गर्न चाहन्छन् त्यसैले शारीरिक बलको प्रयोगभन्दा पनि प्रविधिको प्रयोग गरिन्छ । जुन कुरा मान्छेले गर्नुपर्ने हो, त्यसलाई प्रविधि प्रयोग गरेर कम खर्चमा सहज र सरल तवरले पूरा गरिन्छ । बजारमा कस्तो प्रविधिको माग छ ? मागअनुसारको अध्ययन र अनुसन्धान गरेर प्रविधिको आविष्कार गर्न दक्ष इन्जिनियर आवश्यक छ । त्यस्तै, हरेक कार्यालय प्रविधिमैत्री बनाउन राज्यले सुरु गरेको छ । ती सबै क्षेत्रमा काम गर्न दक्ष जनशक्ति आवश्यक भएकाले कम्प्युटर इन्जिनियरिङ शिक्षालाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, साउन २७, २०७६, १२:५३:००